Iyo itsva ARM era: chii chakatimirira ... More inoshanda supercomputing | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe ukaudzwa makore mashoma apfuura kuti supercomputer ine machipisi akavakirwa pa iyo ISA ARM ivo vaizotora chinzvimbo chekutanga che TOP500 (runyorwa rwevane makomputa mazana mashanu vane simba kwazvo pasi rese), kuseka uye kuseka kwaizove kwainzwika. Hapana munhu akafungidzira kuti chivakwa chakange chisingashande chingasvika ipapo.
Zvishoma nezvishoma, maARM machipisi anga achiwana ivhu, achikunda iyo nhare mbozha yekugona kwavo uye mashandiro avo, pamwe nezvimwe zvakawanda zvakagadzirwa. Asi makore mashoma apfuura vatanga kugadzira mamwe maseva ane ARM yakaderera kushandiswa, uye yakatanga kutamba neichi ISA mune iyo HPC (High Performance Computing) chikamu
Nhau dzakasvetuka nguva pfupi yadarika nezve izvo Apple inosiya Intel Kugadzira yayo ARM-yakavakirwa machipisi kwaive kwakakosha, kune zvese izvo zvinosanganisa, asi zvakaenda zvisingazo zivikanwe nedzimwe, dzakakura zvikuru nhau. Uye ndeyekuti iyo ARM supercomputer inogona kurova mashandiro eiyo IBM Summit uye kukunda chinzvimbo chekutanga cheTop500 rondedzero. Kwenguva yekutanga ARM inosvika pakakwirira kudaro, uye izvo zvave kureva pamberi nepashure ...
Pfungwa iyo yakatungamira kune EPI chirongwa kugadzira ramangwana maARM maprosesa eiyo tekinoroji isiri-kuvimba kweiyo HPC chikamu muEurope neRISC-V accelerators.
Kudzokera kuApple, zvakaratidzika kunge zvisinganzwisisike kuti chipiko cheARM chinogona kupfuura icho cheIntel mukugona uye mashandiro, asi Apple yakazvironga uye ichakwanisa kugadzira magadzirirwo anonakidza kwazvo. Intel iri kuramba ichiwedzera kuoma, uye kwete chete nekuda kwemakwikwi kubva ku AMD ...
1 Komputa huru
Asi izvo iwe zvausingazombofungidzira kare kare ndizvozvo inogona zvakare kuvezwa korona kuHPC. Iwe unoda kuziva zvimwe zvakawanda here? Zvakanaka, mune yeTop500 runyorwa rwaJune 2020, yepamusoro nzvimbo inoitwa inobatwa neyeJapan supercomputer Fugaku. Supercomputer yakavakirwa paFujitsu A64FX 48C machipisi pa2.2Ghz, iyo inosanganisa 7.299.072 yekugadzirisa macores ekuwedzera mhuka yekukwirisa poindi komputa mashandiro.
Zvikurukuru inosvika 415,5 PFLOPS (ndiko kuti, 415.500.000.000.000.000 kuverenga nemadhiimendi pasekondi) uye ichashandiswa pakutsvagirisa SARS-CoV-2, pakati pezvimwe zvinhu.
Iyo yakaiswa paRIKEN Computing Center muKobe, Japan. Mune ino data data yavo inopfuura 150K node Yacho iyo inoumbwa, yakabatana kuburikidza neiyo inomhanyisa Tofu Interconect D network yekubatanidza iyo ARMv8.2-A SVE machipisi e52 cores pane node.
Uyezve shandisa memory yakakwira-bandwidth HBM2 ine chinzvimbo che32 GiB pane node. Kuchengetedza zvine hungwaru, ine 1.6 TB NVMe yakagovaniswa pamatanho gumi nematanhatu, pamwe ne16 PB Yakagovaniswa FS, uye rekuwedzera gore rekuchengetedza sevhisi.
Sezvo inoshanda system shandisa linux, kunyanya kugoverwa kweRHEL 8, pamwe neiyo IHK / McKernel panguva imwe chete. Zvese zviitiko zvekuita zvakayerwa pasi paMcKernel, kunyangwe Linux iripo kuti ipe mamwe masevhisi ePOSIX.
Iyo yekugadzirisa mhuka iyo yakaburitsa iwo manhamba iri "kuzvininipisa." Icho chip chakagadzirwa naFujitsu. Inodaidzwa kuti A64FX uye iri microprocessor yakavakirwa pane iyo ARM 8.2A dhizaini, zvakare kutora SVE (Scalable Vector Extensions), mamwe ekuwedzera kune iyo base ISA kuti uwane zvirinani kuverenga kuverenga.
Iyo A64FX iyo ine Fujitsu yakagadzirirwa saka zvinotsiva ayo apfuura SPARC-based HPC machipisi. Uye havana kungoisa nhanho yekutora iyo Fugaku kumusoro kweTop500, asiwo kuve wekutanga kutsigira 512-bit SIMD EVS.
Aya machipisi akagadzirwa mukati TSMC mafekitori, zvimwe chete kwavanogadzira Zen ye AMD, uye nekwavanogadzira chip ramangwana reEurope. Iyo tekinoroji ivo vakashandisa 7nm tekinoroji kuvaka kwavo 8.786.000.000 transistors. Zvese izvo mune chidiki chip chinongoda chete 594 pini.
Pamusoro pezvo, processor yega yega inoshandisa 32GB yeHBM2 ndangariro ine 1TB / s bandwidth, ine 16 nzira kana nzira dzePCIx paprosesa yekuzvibatanidza nemaacceterator, akadai seGGPPU uye maFPGA.
Pakupedzisira, inoshanda pa2.2 Ghz uye mapakeji akakwana akawedzerwa kupedzisa iwo huwandu hweanosvika 7.3 mamirioni cores uye angangoita mashanu PB ekurangarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo itsva ARM era: chii chakatimirira ...
Iyo nhanho yekugadzirisa iyo yakave yakagadziriswa uye nezveramangwana rinoshanda mashandiro ayo izvi zvichasanganisira zvinoshamisa. Parizvino, pandiri kutumira chirevo ichi pane rako rakanaka peji, iyo chip inoshandiswa nekombuta yangu desktop iIntel. Iyi PC ine makore masere ekuberekwa, asi ini ndichiri kutarisira kuti inotora kanokwana kana mamwe makore maviri, inopfuura nguva yakaringana yekuti kufambira mberi uku kukuru kuitwe kwete chete kumunda weKambani asiwo kunzvimbo yekumba.
Ini ndine makore makumi matanhatu nerimwe uye apo maRISC processors akatanga kuve nematambudziko, nekuti akagadzirwa nemakambani madiki uye kushambadzira kushoma; Aigara achitaura kuti rimwe zuva rombo rake rinogona kuchinja uye uyu unogona kunge uri mukana wake mukuru
Pindura kuna Cesare
Ini ndichafanirwa kurova Rasperry Pi kuti nditonhore neARM.
Unodakadza muchina, ngativimbei kuti iko kushandiswa kwekuenzanisira kweCovid mune ino supercomputer kunounza mhedzisiro.
Kana zvichibvira, ndinoda kuenzaniswa kwesimba reprosesa iyi nematanho. Kunyangwe kana ichibva mukuparadzanisa petaflops. Pamusoro pe500 Gbflops ndiyo iyo Ryzen 3600 kana i510600. 415,5 PFLOPS / 150k node ~ = 415.500.000.000.000 / 150 = 2.770.000.000.000 => 2.770 gigaflops parimwe node.
415.500.000.000.000 / 150
Ndokunge, kupfuura x5 yeazvino anotengesa zvakanyanya mutengi X86 processor.
Izvo zvinoreva kuti ARM makomputa ega anogona kupihwa neGNU - kana maChannelbook - ane simba - uye pamwe anodhura - kupfuura dzimwe nzira dzeX86.
Kana ndikashanda kuValve, ndinenge ndave kutogadzira vhezheni yeSteam yemaoko - chromebook yatovepo - kutoshamisika kana ndichigona kugadzira yakanaka, yakanaka uye yakachipa Steam Machine ine iyo processor kana imwe isingadhuri vhezheni.
GIGA 9 / TERA 12 / PETA 15 (zero)
Muzuva rayo, AMD "yakaisa Intel mumatambudziko akakomba." Transmeta neCrusoe yake vakaitawo kunge vari kuisa Intel mu "dambudziko rakakomba." Uye kwete kare kare, maPowerPC aive peya yemonimu uye Intel yaizonyangarika (hurukuro yaMaquero yakashanduka sekunge yakanga isati yambovapo apo Apple yakachinjira kuPentium).
Wese munhu anoita kunge anokanganwa izvo:
1.Intel ine yakanakisa semiconductor hwaro pasirese.
2.Intel inogona kuwana mainjiniya epasirese.
3.Intel ine marezinesi eARM mudhirowa. Chero zuva raunonzwa sekuda kwaro, unogona kusungira kumusoro kuita maARM emhando yepamusoro kupfuura izvo zviri kuitwa nhasi uye uwane mari yakawanda. Uye kana uchiida, iwe uchatenga marezinesi anodikanwa.
Saka kwete, tichava neIntel kwechinguva.
Pindura kune Exteban
Kwakarurama. Moyo wangu mudiki bhuruu ... ini ndinovhotera Intel.
Zvimedu, iri nyore torrent mutengi iyo iyo iwe yaunongoda kurodha ine zero zero zvinokanganisa